Computer Technical Notes & Sharing Softwares: 2007
COMPUTER တွင် USB အသုံးပြုခွင့်ပိတ်ထားနည်း
Desktop ပေါ်မှာ shortcut ဖန်တီးပြီးသင့်ရဲ့compute...
HD speed မြင့်တင်ရအောင်
New Riders - A+ Certification Guide
Run Box ထဲမှာ နောက်ထပ်ရိုက်လို့ရတဲ့ Command လေးတွေ...
Run command box အတွက် code များ
Run နဲ့သွားလို့ရတဲ့ Shortcut များ
Posted by SLIP at 10:07 PM 1 comments
ALT+- (ALT+hyphen): Displays the Multiple Document Interface (MDI) child window's System menu (from the MDI child window's System menu, you can restore, move, resize,minimize, maximize, or close the child window)
ALT+F6: Switch between multiple windows in the same program (for example, when the Notepad Find dialog box is displayed, ALT+F6 switches between the Finddialog box and the main Notepad window)
Posted by SLIP at 9:45 AM0comments
Posted by SLIP at 12:28 AM0comments
Step2: ရောက်ပြီးဆိုရင် plug_ins Folder ကိုဖွင့်ပြီး..ရှိသမျှ File အားလုံးကို Cut(ctrl+x)လုပ်လိုက်ပါ.
Step3:ပြီးရင် back ကိုပြန်သွားပြီး Cut လုပ်ထားတဲ့ File ကို Optional ဆိုပြီး Folder ကိုဖွင့်ပြီး
Step4: အခု Desktop ပေါ်က Adobe Acrobat ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ..အရင်ကထက်နှစ်ဆ၊သုံးဆ..ဒီလိုမျိုးမြန်ဆန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်..
Posted by SLIP at 1:19 PM0comments
Labels: Adobe Acrobat (PDF)ကို notepad လိုအမြန်ဖွင့်မယ်
Posted by SLIP at 12:23 AM0comments
Labels: Introduction to Computer Security
1) Notepad ကိုဖွင့်ပါ။
2) ပြီးရင် အောက်က Code တွေကိုရေးပေးလိုက်ပါ။
3) ပြီးရင် File Name မှာ ကြိုက်တာရေးပြီး နောက်ဆုံးမှာ .inf ဆိုပြီး
မှတ်ချက်။ File တွေကို CD ၊ DVD မှာထည့်ရင် ဘာ Folder မှမခံပါနဲ့
ဒါဆိုရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ Setup-filename.EXE နေရာမှာတော့
ကိုလိုချင်တဲ့ EXE File နာမည်ကိုဘဲထည့်ပေးပါ။ ဥပမာ ကိုလိုချင်တာက
Photoshop.EXE ဆိုရင် အဲ့ဒီအတိုင်းဘဲထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ဘာမှမပြောင်းပါနဲ့။
4) ပြီးရင် CD ဒါမှမဟုတ် DVD တခုခုထဲကိုထည့်ပြီး Burn လိုက်ပါ။ Autorun ပါ ပါပစေ။
5) Burn လို့ပြီးပြီးဆိုရင် အဲ့ဒီ Burn လိုက်တဲ့ CD ၊ DVD ကို Computer ထဲကိုပြန်ထည့်ကြည့်ပါ။
Autorun ပါလိမ့်မယ်။ Autorun မခဲ့ရင် လဲ My Computer ကိုသွားပြီး DVD ၊ CD Drive ကိုနှိပ်လိုက်ရင်
သူ Autorun ပေးပါလိမ့်မယ်။
Posted by SLIP at 1:11 PM0comments
Labels: Auto Run File များလုပ်ခြင်း
Posted by SLIP at 1:21 PM0comments
Posted by SLIP at 1:05 PM0comments
Posted by SLIP at 12:17 AM0comments
Mechanics Analysis Composite Materials
Metalurgy of Welding
Method For Monitoring And Diagnosing
Practical Machinery Management for Process
Process Plant Machinery-2ed
The mechatronics handbook.2002
Desktop ပေါ်မှာ shortcut ဖန်တီးပြီးသင့်ရဲ့computer ကို Lock ချကြည့်ရအောင်
- ပထမဆုံးသင့်computerရဲ့ desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ နေရာလွတ်တစ်ခုမှာ right click လုပ်ပါ
- ပြီးရင်တော့ New – Shortcut ဆိုတာကိုရွေးလိုက်ပါ
- Shortcut ဖန်တီးဖို့box တစ်ခုကျလာပါလိမ့်မယ်
- Type the location of the item: ဆိုတဲ့စာကြောင်းအောက်က text box ထဲမှာအောက်မှာပေးထားတဲ့ code ကို copy ကူးထည့်လိုက်ပါ။ %windir%\_System32\_rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation
- ပြီးရင် Next ကိုနှိပ်ပါ
- Shortcut name ကိုတော့မိမိအဆင်ပြေမဲ့ name ပေးလိုက်ပါ
- ပြီးရင်တော့ Finish ကိုနှိပ်ပါ
- ဒါဆိုရင်တော့သင့်ရဲ့ desktop မှာပေါ်နေတဲ့ shortcut လေးကို double click နှိပ်ပြီး Lock ချလို့ ရသွားပါပြီ..
1) Start ထဲက All Programs ကိုသွားပါ။
2) ပြီးရင် Accessories ကိုသွးပြီး System Tools ကိုသွားပါ။
3) ပြီး ရင် Disk Cleanup ကိုသွားပြီး Files from all users in this computer ကိုနှိပ်ပါ။
4) ပြီးရင် ရှိသမျှ File တွေကို Mark လုပ်ပြီး Ok နှိပ်လိုက်ပါ။
5) C:\_ ထဲမှာရှိတဲ့ ဟာတွေကို ဖြတ်ပြီးပြီးဆိုရင် D:\_ ကဟာတွေပါဖြတ်ပေးလိုက်ပါ။
2) ပြီးရင် Accessories ကိုသွးပြီး System Tools ကိုနှိပ်ပါ။
3) အဲ့ဒီထဲက Disk Defragmenter ကို ရွေးပါ။4) အမြဲတန်း အမြဲတန်း အပ်ါကနည်းလမ်းတွေအတိုင်း အမြဲတန်းအမြဲတန်း လုပ်ပေးပါ။
1) Disk Defragment လုပ်ပါ။
2) Disk Cleanup လုပ်ပါ။
3) System Restore သင့်ရင် Restore လိုက်ပါ။
4) ပြီးရင် Recycle Bin ထဲ က အမှိုက်တွေကို ဖြတ်ပေးပါ။
ဒါဆိုရင် Computer က မြန်သွားပါ။လိမ့်မယ်။
Posted by SLIP at 1:08 PM0comments
1. C for Dummies
2. C++ for Dummies 5th Ed
3. C++ Timesaving Techniques For Dummies
4. Cake Decorating For Dummies
5. Calculus Workbook For Dummies
6. Camera Raw with Photoshop for Dummies
7. Car Hacks & Mods For Dummies
8. CCNA For Dummies
9. Computer Viruses for Dummies
10. Copyediting & Proofreading for Dummies
11. Creating Family Web Sites For Dummies
12. Creating Web Pages 8th Ed For Dummies
13. Creating Web Pages AIO Desk Reference 2nd Ed For Dummies
14. Creating Web Pages AIO Desk Reference 3rd Ed For Dummies
15. Creating Web Pages For Dummies 7ed
16. Cruise Vacations 2006 Ed For Dummies
17. Cryptography For Dummies
18. Crystal Reports 10 For Dummies
19. Crystal Xcelsius For Dummies
20. CSS Web Design for Dummies
21. Cutting Edge PowerPoint 2007 For Dummies
22. Google Search & Rescue For Dummies
23. The Torah For Dummies
Posted by SLIP at 12:51 PM0comments
Posted by SLIP at 12:30 PM0comments
1.Start-->Run တွင် SYSEDIT.EXE လို့ရိုက်ပါ။
2.System Configuration Editor ရောက်ပါမယ် C:\_ system.ini file window ကိုထပ်မံ ဖွင့်ပါ။
3.Scroll Down ဆွဲပြီးအောက်နားလေးက " [386enh]" ဆိုတာလေးကို ရှာလိုက်ပါ။
4." [386enh]" အောက်ကပ်ရပ်မှာ" Irq14=4096 " ဟုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ
5.File-->Save ပြီး၊ SYSEDIT ကိုပိတ် ကွန်ပျူတာကို reboot ပေးပါ။
6.ကြိုက်တဲ့ system info. software မဆို အသုံးပြုပြီး ဘယ်လောက်တိုးတက်လာသလဲ ဆိုတာ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
Run Box ထဲမှာ နောက်ထပ်ရိုက်လို့ရတဲ့ Command လေးတွေ
* ဆော့ဖ်ဝဲတွေ ထည့်သွင်းထားတဲ့ နေရာ
သုံးနည်းလေးပါ………..ပထမဆုံး”run box”ကို ဖွင့် ရမှာပါ။window key နဲ့ R ကို တွဲ နှိပ် ပါ။”Run box” ကျ လာပါ မယ်။
အဲဒီ “box” လေးမှာ ဒီ “command”တွေကို ရိုက် ပြီးသုံးကြည့် ပါ။
Posted by SLIP at 8:49 AM0comments
Posted by SLIP at 12:17 PM0comments
Labels: PC Mechanicn
%allusersprofile% ................. * ကွန်ပျုတာကို သုံးနေတဲ့သူ အားလုံးရဲ့ Profile တွေရှိနေတဲ့ နေရာကို ပြပေးပါတယ်။
%appdata% .................* အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေ သိမ်းထားတဲ့ နေရာပါ။
%comspec% .................* Command shell တကယ် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နေရာ။
%homedrive% .................* လက်ရှိသုံးနေတဲ့ သူရဲ့ Home Drive နေရာ။
%homepath% .................. * လက်ရှိသုံးနေတဲ့ သူရဲ့ Home Drive လမ်းကြောင်း။
%logonserver% ..................* လက်ရှိဝင်သုံးနေတဲ့သူရဲ့ Domain Controller
%programfiles% ..................* ဆော့ဖ်ဝဲတွေ ထည့်သွင်းထားတဲ့ နေရာ
%systemdrive% ..................* ၀င်းဒိုးရဲ့ ပင်မ Directory
%systemroot% ..................* ၀င်းဒိုးရဲ့ ပင်မ Root Directory
%tmp% သို့မဟုတ် %temp% ..........* လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ အလုပ်လုပ်လက်စ ဖိုင်တွေရှိရာနေရာ
%username% .................* လက်ရှိသုံးနေတဲ့သူ အမည်
%userdomain% .................* လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Domain အမည်
%userprofile% ..................* လက်ရှိသုံးနေတဲ့သူရဲ့ Profile ရှိရာနေရာ
%windir% ..................* OS တင်ထားတဲ့ နေရာ
Posted by SLIP at 8:47 AM0comments
Posted by SLIP at 8:35 AM0comments
Posted by SLIP at 11:36 AM0comments